Wasiirka Warfaafinta iyo isgaarsiinta ee Jabuuti oo booqday Xarunta Wasarada Warfaafinta – Walaal24 Newss
Wasiirka Warfaafinta iyo isgaarsiinta ee Jabuuti oo booqday Xarunta Wasarada Warfaafinta
Wasiirka Warfaafinta XFS Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye ) ayaa xarunta wasaaradda ku soo dhaweeyay Wasiirka Warfaafinta iyo isgaarsiinta Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ridwaan Cabdillaahi Bahdoon oo shalay soo gaaray caasimadda dalka.
Wafdiga wasiirka Warfaafinta Jabuuti oo uu wehliyay safiirka Jabuuti u fadhiya dalkeena iyo masuuliyiin kale ayaa qayb qeyb u booqday waaxyaha Warbaahinta Qaranka oo ay ku jiraan TV ga, Radio Muqdisho iyo Keydka Radiyaha oo xasuus gaar ah uleh dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti halkaas oo ay masuuliyiintu intii ay booqanayeen Keydka dhageysteen heeso iyo gabayo ay qaden fanaaniin Soomaaliyeed kuwaas oo lagu dhiiri galinayay gobanima doonkii Jabuuti oo ay Soomaaliya hormuud ka aheed.
Masuuliyiinta wasaaradda oo uu hormuud u yahay Wasiirka Wasaarada warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiisaka Maxamed Cabdi Xayir ayaa wafdiga Jabuuti warbixin ka siiyay shaqooyinka wasaaradda ay u hayso Qaranka iyo qaabka ay u shaqeyso.
Wasiirka wasaaradda Warfaafinta iyo isgaarsiinta Jabuuti mudane Ridwaan Cabdillaahi Bahdoon ayaa uga mahad celiyay madaxda wasaaradda soo dhaweyntooda.
Intaa ka dib wasiir Maareeye ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay wafdigii ka socday Jamhuuriyadda Jabuuti oo ay ka wada hadleen sidii dowladda Jabuuti gacan uga geysan lahayd tayeynta iyo xoojinta warbaahinta Qaranka.
Maxkamada Caalamiga ee ICJ oo dib u dhigtay dhageysiga dacwada Bada ee Soomaaliya iyo Kenya
Gaadiileyda BL-Ka oo cabasho banaanbax ka dhigaya magaalada Muqdisho
Sawiro: Garsoorayaasha Maxkamadda Sare uu Madaxweynaha magacaabay oo la dhaariyey
Ciidanka Amniga oo mid kamid ah maskaxdii ka dambeysay weerarkii Hotel Saxafi gacanta ku soo dhigay
Ciidanka Amniga oo gacanta ku soo dhigay labo nin oo Bam gacmeed tuuray labo Barood
Dhageyso: Xildhibanada Aqalka sare ee laga soo dortay Mamul Goboledka Hirshabeelle oo shir jiraa’id ku qabtay xarunta Golaha Aqalka sare
Dhageyso: Xildhibaan Maxamed Siciid “Waa tallaabo geesinimo leh oo uu qaatay, waana Oday Somaliyed oo taariiqda dalka baal dahab ah ka galaya”
Dhageyso: Feysal Cali Warabe “madaxweyne Farmaajo ka wada hadleen sidii deeqaha loo qeybsan lahaa iyo sidii loo joojin lahaa dagaalka…
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi oo ka hadlay Balaadhinta Biyaha iyo adkeynta Nabadgalyada ee magalada Berbera